Cumar - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Cumar bin Khatab)
Kani waa maqaal ku saabsan Magaca Cumar. Qaab adeegsi kale, eeg Cumar (faah faahin).
Rashidun Caliph Umar ibn Al-Khattāb - عُمر بن الخطّاب ثاني الخلفاء الراشدين
Boqortooyada Islaamka wakhtigii Cumar
Hogaamihii la hubey
Cumar bin al-Khattab
(Af-Carabi: عمر بن الخطاب)
23 Ogusto 634 C.D – 03 Nofember 644 C.D
579 C.D (45 Hijrada ka hor)
Meesha ku dhashay
Wakhtiga uu dhintey
03 Nofember 644 CD (26 Dulhijjah 23 Hijrada ka dib)
Meesha uu ku dhintey
Ka horeeyay maamulka
Ku xigay hogaanka
Cismaan binu Cafaan
Sayd ibn al-Khattab
• Umm Kulthum bint Asim
Al-Faruq ("Kala saarihii runta iyo beenta")
Amir al-Mu'minin ("Hogaamiyihii dadka iimaanka qaba")
Si kastaba ha ahaatee, goortii Nebi Muxamed geeriyooday waxaa khulafo Raashidiintu si waafaqsan dardaarankii nebiga isla garteen in Abu Bakr lagu wareejiyo hogaanka iyo talada maamulka dowladii Islaamka. Wakhtigani waxaa dhacday khilaaf aad u wayn oo dad badan ayaa diinta Islaamka dib uga noqdey maadaama nebigii waxyigu ku soo dagayay geeriyooday.
2.1 Soo Islaamidii Cumar
4 Hogaamiye Cumar
5 Qisooyinka Cumar
Abtirsiinta Cumar binu Khattab waxay ka bilaabantaa aabihii al-Khatab ibn Nufayl bin Cabdu al Cuzy bin Rayaax bin Cabdalah bin Qarad bin Rasaax Cuday bin Kacab bin Luay bin Qaalib bin Fahar bin Malik bin Nadar bin Kanaana bin Khusayma bin Mudrak bin Ilyaas bin Madar bin Nasar bin Macad bin Cadnaan binu Quraysh al Carabi.
Soo Islaamidii CumarEdit
Cumar wuxuu ka mid ahaa raggii markii hore Islaamka iyo muslimiinta aadka u dhibi jirey, sanadkii lixaad ee soo diriddii Rasuulka (s.c.w)
ayuu maalin soo kacay isagoo raba inuu Rasuulka SCW dilo, goor uu dhexda marayo ayaa nin ka hor yimid oo ku yiri "Cumar xaggee u socotaa?", wuxuu yiri "waxaan rabaa inaan Maxammed soo dilo, maxaa yeelay dadkii buu kala geeyey", markaasuu ku yiri "ma waxaad u malaynaysaa haddii aad disho inaad reer binu Cabdimanaaf ka nabadgelaysid, haddiise aad wax tarayso walaashaa Faadumo iyo ninkeedii Siciid way Islaameene maad iyaga wax ka qabatid!".
Cumar iyo Xamsa markay soo islaameen Ilaahay (s.w) wuxuu muslimiintii siyaadiyey cissi iyo xoog, xaaladdii Makkana way is beddeshay. Cumar isla markiiba wuxuu qaadey tallaabooyin wuxuuna yri "waxaan is weydiiyey ninka dadka ugu neceb islaamak markaasaan xasuustay inuu Abii-jahal yahay, markaasaan gurigiisii ugu tegey oo ku garaacay, albaabka ayuu iga furay oo i soo dhoweeyey yirina "maxaad iigu timid Cumar", waxaan ku iri "waxaan kuugu imid inaan ku ogeysiiyo inaan islaamay oo rumeeyey Alle iyo Rasuulka SCW , waxaan haysan jirneyna aan beeniyey", Abii-jahal intuu naxay ayuu yiri "waxaad la timid baa xumaaday" gurigii buuna ku cararay. Sidoo kale wuxuu Cumar yiri "waxaan is weydiiyey ninka ugu warqaadka badan reer Makka oo dadka oo dhan hadalka gaarsiin kara, waxaan xasuustay inuu yahay Sumeyn ibnu Camar al-juhani", markaasaan u tegay oo ku iri "waan islaamay " markaasuu u qeyliyey isagoo leh "Cumar ibnu Khadhaab waa iishay" Cumarna wa ka daba hadlay isagoo leh "ma iilane waan islaamay".
= Dagaaladii uu Galay =cumar binu khattab
Cumar Bin Khadaab R.C(Carabi 586-590 عمر بن لخطاب ) waxaa kaloo loo yaqiin Cumar Alfaruuq waana Amiirka labaad ee Amiirul Mu'miniinka, waana khaliifkii ugu horeeyay ee loogu waco, wuxuuna ka tirsan yahay Afarta Khulafo al'Raashidiin waana saxaabi katirsan asxaabta Nabi Muxamed S.C.W
. Waxa uu kamid ahaa tobankii Saxaabi ee loogu bishaareeyay janada iyaga oo ifka jooga. Waxa uu ahaa ruuxii ugu horeeyay ee sameeya kalandarka Taariikhda Islaamka ee Hijriga. Xiligiisii maamulka Dawladda Islaamku waxa uu gaaray Liibiya, Falastiin, Masar iyo Shaam (maanta loo yaqaano Suuriya). Waxaa kale oo islaamku uu qabsaday Qudus. Intaasi waxaa dheer, waxa lajabiyay labadii quwadood ee ugu waa waynaa dunida ee kal ahaa boqortooyadii Ruum (Romans) iyo boqortooyadii Faaris (Persian Empire).
= Qoyska Cumar
Habeen ka mid ah habeenada ayaa waxaa dhacday inuu Amiirkii Muslimiinta ee wakhtigaas, Cumar Ibn Khattab (ilaahay ha ka raali noqdee) oo dhex qaadayay xaafadaha Madinal Munawarrah si uu ogaado dareenka iyo dhibtaada dadkiisa. Kadib wuxuu maqlay oohin, markaas ayuu ku leexday gurigii ay kasoo baxaysay oohinta. Markaas ayuu arkay haweenay iyo caruurteeda oo oynaya, iyo digsi dabka saran. Kadib ayuu haweenaydii waydiiyay waxa keenay oohinta caruurta. Gaajo inay hayso ayay u sheegtay Amiirka. Hadaba digsiga maxaa saaran ayuu waydiiyay. Biyo caruurta lagu sasabo ayaa saaran ayay ugu jawaabtay. Maysan garan inuu ninka la hadlayo yahay Cumar (RC).
Cumar (rc) oo u la socdo gacan yarihiisii Aslam ayaa markaas soo aaday dhanka magaalada ilaa uu gaaray Baytul Maalkii. Markaas ayuu bilaabay inuu soo raro cunto kala duwan, saliid, bariis, subag iyo xogaa lacag ah. Markuu jawaankii buuxiyay ayuu ka codsaday Aslam inuu dhabarka u saaro. Aslam ayaa diiday asaga oo ka xishooday inuu Amiirka Muslimiinta jawaan buuxo dhabarka u saaro. Cumar ayaa ku adkaystay, kuna yiri Aslam: “Ma adiga ayaa Maalinta Qiyaamaha culayska iga qaadi doona. Waa inaan aniga xanbaaro jawaankan maadaama Maalinta Qiyaamo aniga la I waydiin doono. Aslam ayaa markaas Cumar (rc) u saaray dhabarka iyaga oo bilaabay inay aadaan dhankii guriga haweenaydii baahnayd. Markii ay tageen gurigii ayuu Cumar (rc) digsi ka buuxiyay raashin, ilaa uu ka bislaado, hadana u soo riday caruurtii, iyaga oo ka dhargay isla markiina bilaabay cayaar. Haweenaydii oo aad u faraxsan ayaa Cumar (rc) ku tiri: “wallee adaaba ka fiican Amiirka Muslimiinta, Cumar.” Cumar (rc) oonan wali isu sheegin ayaa ku jawaabay: “Hadaad aniga iga soo war doonto, waad arki doontaa Amiirka Muslimiinta insha’Allah.” Kadib ayuu iska fariistay isaga oo fiirsanaya caruurtii oo cayaar gashay. Intuu Aslam jaleecay ayuu yiri:
“Ma ogatahay waxa igu keenay inaan halkan fariisto? Hadaayey caruurtaan way ooyaysay, iminkana way qoslayaan oo cayaar ayay ku jiraan. Inaan iska fiirsado faraxooda ayaan jeclaystay.”
↑ "Madar bin Nasar bin Macad bin Cadnaan binu Quraysh al Carabi"
↑ "kalandarka Taariikhda Islaamka ee Hijriga"
↑ "Liibiya, Falastiin, Masar iyo Shaam (maanta loo yaqaano Suuriya)"
↑ "boqortooyadii Ruum (Romans) iyo boqortooyadii Faaris (Persian Empire)"
↑ "Habeen ka mid ah habeenada ayaa waxaa dhacday inuu Amiirkii Muslimiinta"
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumar&oldid=172566"
Last edited on 9 Jannaayo 2018, at 19:46